Ngaba unokubonisa imaphu enye? -Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ngaba unomdla ngeemephu enye?
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskcadastreGoogle umhlaba / imephuGIS asiboniseMicrostation-Bentley
Sawubona bam bahlobo, ngaphambi kokuya eholidini, ixesha apho andikulindele ukubhala kakhulu ndikuxelela ibali ixesha elide kodwa liyimfuneko kwii-geofanáticos ngeveki yeKrismesi.
Ngeveki abanye abazalwana abasebenzisanayo baye bandicela ukuba ndibuze imephu yendawo apho senza khona uphando lwama-cadastral. Uyazi ukuba umqeqeshi we-GIS waya eholide ndababuza iiyure ezimbalwa zikhangele ukuba zibachukumise, bekuya kuba ngumzila wokugqibela ukuba ungabaniki umphumo omuhle kwaye ubhale amava kwiphepha lokugqibela ukusuka ekhaya.
Ngoko ke uqhathanisa phakathi kwezi zixhobo ezine endizisebenzisayo ukudlala kunye nokulahla okuvunyelwe kwimephu xa ushiya umqambi: AutoCAD, Microstation, ArcView, Manifold kunye neGoogle Earth. Ndiyaqonda ukuba ukunambitha imibala, wonke umntu uyaqiniseka ukuba intombazana enomdla naye ekuthandeni ngobusuku obuhle:
Nangona kunjalo wonke umntu sifuna isicelo esinebalabala ngeemephu ezidwetshiwe, kangangokuthi zixhaphake kunye nezinye iinkqubo kwaye zichanekile ukulungiswa kwemifanekiso.
Andizange ndifune into ethile ye-astral, nje ukuprinta i-1 imephu ye-cadastral: 1,000 kwinqanaba le-E0312Y, kwinqanaba le-16 laseNyakatho, kunye ne-UTM Ukujikelezwa kwee-cylindrical kunye ne-Google Earth orthophoto. Ngeziqendu eziqingqiweyo ngendawo, ebonakalayo kwi-50% kunye neGridi WGS84
Nangona andizange ndiyenze nge-AutoCAD okanye i-Microstation, ndathatha imizuzu emibini ukuhlalutya oko kuza kwenzeka; Imephu yokuqala yayise-dxf ngoko akukho mntu unenzuzo:
Ukuba wenza nge AutoCAD
Easy ukuzoba umfanekiso, yishenxisele lula ukubeka uze unike ithuba kodwa ayikwazi ukuthumela kwenye ifomati kunye nexesha xa ifika sokuphena kade.
Umshicilelo we-vector olula, umfanekiso wezobugcisa oqhelekileyo
Ingerphase engumhlobo, emva kokubukela okuninzi
I-Complex yakha ipenisi yokushicilela ngexesha elifutshane, kufuneka uguqule iipropati ukusuka kwipaneli ecaleni kunokusebenzisa iindawo
Ukudala iimoko akukhawulezi kangangoko nangona unokongeza imibala enemibala kunye ne-transparent ... kwaye ulwe nesitayela seLena (lts)
... ukuba bathi ubeko nangoku endandikuyo, kuya kufuneka ukuba ukucwangcisa isitayile somgca kuba akukho obuluqilima ningazikrazuli iingubo zabo ukufumana isikali enamandla graphic ... UTM igridi kuphela Map3D
Akunakwenzeka ukusebenzisana neGoogle Earth ngaphandle kweprintsreen kwaye akukho ndlela elula yokwabela i-geodesic ngaphandle kweMaphuXUMUMXD.
Ekugqibeleni, luncedo ekusebenziseni i-CAD, ubuhlobo kodwa ungenza i-AutoBentley inguqulelo
Ukuba ndiyenzile nge-Microstation:
Kulula ukubiza umnqwanqwa, Ukulula ukuwuhambisa kwindawo kwaye uyinike ukujika (ukuze ukungacaciswanga kusuka kwiGoogle Earth) kwaye uyithumela kwenye ifomathi.
Umshicileli we-vector olula, isitayela somgca onamandla
Isixhobo esibonakalayo esinqabileyo, nangona emva kweminyaka emininzi ityekile.
Kunzima kakhulu ukunika ikhwalithi yokuprintwa kakuhle ngexesha elifutshane, nangona iindawo ezilula zokusebenzisa (izalathisi),
Kulula ukudala imilo, nangona ukwenza i-transparencies ayinakwenzeka ngaphandle kokusebenzisa izinto eziphathekayo.
Ukulawulwa kweendlela ezenziwa ngabomntu abaninzi abaye bazisebenzisayo, babeza kukhangela ukulila kunye namaseli aseMntla kunye negridi ye-UTM yayiza kwenzeka kuphela nge-Geographics.
Nge-plugin yeGoogle Earth kunokwenzeka ukuvula isibonakaliso esifanayo se-Google Earth kodwa awukwazi ukuyizisa kwimephu ngaphandle benzisa iprintscreen... ubuncinci ixhasa inkxaso ngaphandle kokusebenzisa iiGraographics.
Ekugqibeleni, luncedo ekuhleleni kweCAD nangona ndingathanda ukushicilelwa kwe-XM eyayidla imithombo yeV8.
Ukwenza ngeMpawu ephantse ... phantse ngokufanayo ne-ArcView
Ngomzuzu ndazisa umfanekiso ngqo kusuka kwiGoogle Earth, kulula ukuyithumela kwelinye ifomathi, kulula lungisa malunga nemephu
Kulula ukulungiswa kwesitayela esimbala ukuprinta, ukudala imilo elula njengeArcView, nangona i-theming yayilula.
Ukubunjwa kwezinto ezilula
Inkumbulo encinane ... kunye nale mephu
Ngamafutshane, phantse ukukwenza ngeArcView, a indleko ephantsi kunye nekratshi lokungagxothi i-ESRI
Ukujongana okulula kunye nokusebenza, kwi-fly
Isixhobo esibonakalayo esinqabileyo sidinga ixesha lokukhupha.
Akukho ukulungiswa kwevolki esemgangathweni kakhulu, nangona kungcono kuneArcView ngaphandle kwandiso olongezelelweyo
Ukuphathwa kwe-Bizarro 3D, nangona bekuza kukhetha i-ArcView kunye nezinye zezandiso zayo
Ekupheliseni, ukusetyenziswa kwe-GIS kunye nokuphepha ukucima i-ArcGIS, i-ArcIMS, i-ArcSDE, i-ArcServer, Arc2Eart... nangona bam bahlobo bandithathile ngeentlanga.
Ukuphatha imifanekiso emihle kakhulu, ukubukwa kwe-3D kunye nokudibanisa isiseko sewebhu ... vula, upheqa, ukhangele.
Ukubonakala kakuhle imifanekiso kunye nedatha ephekwe ngeMpawu ngaphandle kokuba iphosa ngokubunjwa okanye ezibunzima.
Ukubona nje, akunakwenzeka ukuhlela i-vector en masse
I-Bizarre indlela yokutshintsha isitayela somgca, akanalo ulawulo lwamanqanaba, kuphela iikhewu zomgca
Akunakwenzeka ukuphatha uhlobo oluchanekileyo lokushicilela
Andikwazi ukungenisa ngqo i-dxf
Ekugqibeleni, ndayazi ukuba akusiyo i-GIS / CAD esebenzayo kodwa isenzo sokuziqhayisa,
Emva koko kwintlanganiso abazalwana bavuya kakhulu maphepha kwaye badibana xa beyibona kwiGoogle Earth ... ulwazi lwabo lolwazi lobugcisa luye lwagqiba ukuba senza umsebenzi omhle.
Ngaphandle kokuba uchaze uvavanyo lwexabiso mhlabeni, ukubonisana izakhiwo zokwakha... kakhulu ngaphantsi kuchaneka i-submetric iphunyezwe nge-Magellan Mobile Mapper ye-$ 1,500 kwaye indleko ekupheleni kwe $ 6.72 ngepropati ... kuquka konke!
Ihlabathi lingenakulungeleka ekubeni sizalwa, xa sibona amandla okusetyenziswa ngumshini (Ram's 512) sibona ukuba lo ngumyalelo:
Firefox (78MB), ichanekile ngenxa yokuba ndinayo i-3.2 beta kwaye loo mpazamo yememori echithayo kude kube ukuwa kwayo kungatshintshi uMnu. Google
AutoCAd 2006, (44 MB), ngaphambi kokugcina umz
Umbhali oBomi (32 MB), isicelo endibhalele kuyo, njengokuba rhoqo iMicrosoft isebenzise imithombo 🙂
MSPaint (26MB) ... ngaphandle kwamazwi, isicelo esipheleleyo esivela kwiWindows 3.1 sidla oko, ndayisebenzisa ukukopisha izikrini
Microstation I-V8 (22 MB), i-XM version engcono engayifuni, ngenxa yokwesaba ukuwa
asibonise 7 (17 MB)
Umhlaba ka-Google (12 MB)
ArcView? ... Ndawa kabini, ndicinga ukuba ngenxa yokubaxa kwezixhobo kunye neengcebiso ezimbi ze andr :p
Musa ukucela amapheya kwi-elm ukuba lowo uya kuzidla uyazidibanisa nama-apula ...
Ukubulisa, mbulela ngomonde wakho kwaye siza kukubona unyaka ozayo, ukuba ndikuhlala kwam ezweni elingaqhelekanga.
ArcView Bentley Systems ESRI Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Iimephu kwiwebhu, ngubani oza kuphumelela?
Luiz Amadeu uthi:
Iposti egqwesileyo. Iitekisi zeSeus ngomxholo womxholo ziluncedo kakhulu, ziyahlekisa… hehehe
Bom fim yeveki.
Enkosi Tomas ngengcaciso, nangona ndiqonda ukuba oku kusindisa iFirefox kuphela, eyayinguye owayephambili, kodwa ngokuthelekisayo bonke abanye babesemqolo ngokukhuphisana ngakumbi okanye ngaphantsi kukhuphiswano kwiimeko ezifanayo ...
Ukuthelekiswa kokusetyenziswa kweememori akukoqobo, kuba izicelo ezivela ngasemva zikhupha imemori abayisebenzisayo ukubonisa igrafu, kwaye xa uvula umphathi womsebenzi unokuba nesicelo esisodwa ngaphambili, ekubeni unako ukubona Kwi-percentage consumption consumption, akukho nanye okwenzayo nayiphi na inkqubo.
Okukuzisa okuhle AutoCAD 2009